Hordhac: FC Porto Vs AC Milan Ee Champions league-ga, Guruub-ka B Liiska Xidigaha Maqan iyo Shaxda | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Hordhac: FC Porto Vs AC Milan Ee Champions league-ga, Guruub-ka B Liiska...
Laba kooxood ayaa weli raadinaya guushoodii ugu horreysay ee 2021-22 Champions League iyagoo isku diyaarinaya inay ku dagaallamaan Estadio do Dragao iyadoo Porto ay wajihi doonto AC Milan Group B.
Kooxda Sergio Conceicao ayaa kulankii ugu dambeeyay 5-1 guul-daro ah kala kulantay Liverpool, halka Rossoneri ay la kulantay guuldarro xanuun badan daqiiqadii ugu dambeysay Atletico Madrid.
Porto: Otavio ayaa lagu qasbay in laga saaro horaantii guuldarradii 5-1 ee ka soo gaartay Liverpool, laakiin wuxuu qaatay hal saac oo koobka ah kulankii Sintrense waana inuu ku soo bilowdaa.
Jesus Corona, Luis Diaz iyo Matheus Uribe ayaa sidoo kale la filayaa inay kasoo muuqdaan bilowga kulanka AC Milan.
Chancel Mbemba waa la qiimeyn doonaa, laakiin waxaa laga yaabaa inuusan halis ku gelin halkan.
Ac Milan: AC Milan ayaa qabta walaacyo badan oo maqnaansho ah, iyadoo Theo Hernandez iyo Brahim Diaz ay la maqanyihiin COVID-19. Fode Ballo-Toure iyo Rade Krunic waa inay u wakiishaan labadan, inkasta oo kan dambe uu tartan kala kulmayo Daniel Maldini oo ka dambeeya weeraryahanka.
Mike Maignan ayaa lagu sameeyay qaliin gacanta ah iyadoo Antonio Mirante uusan weli diyaar u ahayn inuu ciyaaro, Ciprian Tatarusanu ayaa booskiisa ku sii hayn doona.
Franck Kessie ayaa ganaax ku maqan kadib casaankii uu qaatay kulankii Atletico Madrid, halka Alessandro Florenzi, Ante Rebic iyo Tiemoue Bakayoko ay maqan yihiin.
Ka dib markii uu keydka ka soo kacay kulankii Verona, Zlatan Ibrahimovic ayaa laga yaabaa inuu hoggaamiyo weerarka Portugal.
FC Porto iyo Milan ma aysan kulmin tan iyo finalkii European Super Cup 2003, markaasoo Porto ay aheyd kooxda heysata koobka UEFA Cup halka Milan ay ku guuleysatay Champions League. Rossoneri ayaa 1-0 ku adkaatay gool uu u dhaliyay Andriy Shevchenko.
Milan markii ugu dambeysay oo ay Porto la dheesho UEFA Champions League waxay ahayd 1996-97 heerkii guruubyada-Porto ayaa 3-2 ku badisay garoonka Meazza ka hor inta aysan barbaro 1-1 ah la gelin Estádio das Antas, iyadoo tababaraha haatan ee Porto Sérgio Conceição uu ciyaaray. Porto ayaa ku dhameysatay kaalinta koowaad ee Group-ka sanadkaas, iyadoo Milan laga saaray kaalinta saddexaad.
Marka lagu daro kulamada is-reeb-reebka, toddobo ka mid ah sideedii kulan ee Milan ay bannaanka ku soo ciyaartay tartamada UEFA ee Portugal ayaa ku dhammaaday barbaro (W1), guushoodii kaliya waxay ka gaartay Porto bishii Maarj 1993, guushii 1-0 ee goolkii Jean-Pierre Papin.
Saacada (22:00 pm Somalia) (21:00 pm Yurub)
Garoonka Estadio do Dragao
Previous articleHordhac: Club Brugge Vs Manchester City Ee Champions league-ga, Guruubka A Liiska Xidigaha Maqan iyo Shaxda
Next articleHordhac: Atletico Madrid Vs Liverpool Ee Champions league-ga, Guruub B Liiska Xidigaha Maqan iyo Shaxda
Chelsea oo guul ka gaartay wadahadalada qandaraaska ee Mason Mount
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay horumar wanaagsan ka sameysay wadahadalada qandaraaska ee ay kula jirto Mason Mount . Hal abuurka khadka dhexe ayaa...
Yaa ka dambeeyey labadii qarax ee mataanaha ahaa ee shalay lagu...
Gary Neville oo u sheegay Jadon Sancho inuu Noqondoono Sida Donny...
Ac Milan oo Gurigeeda lagu Xasuuqay, Roma oo guul gaartay, PSG...